पहिलो चरणको चुनावमा कसले मर्ला बाजी ? | Ekhabar Nepal
पूर्व सहकर्मीसमेत रहेका र यसपटक अलल–अलग पार्टीबाट चुनाव लडेका उनीहरुमध्ये कसलाई गोर्खा २ का मतदाताले चुन्छन् व्यग्र चासोको विषय बनेको छ ।यसैगरी नुवाकोटमा डा. रामशरण महत र अर्जनुन नरसिंह केसीको भाग्य फैसला पनि आजको निर्वाचनबाट हुँदैछ । महत र केसी दुबै जना कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु हुन् ।
सापकोटा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुन् भने बस्नेत बहालवाला । उनीहरुमध्ये कसले चुनाव जित्ला भनेर चासो व्याप्त छ । यद्यपि उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो जीत सुनिश्चित भएको दावी गर्र्दै आएका छन् ।ताप्लेजुङबाट एमाले सचिव योगेश भट्टराई र कांग्रेसका केशव दाहाल उम्मेदवार छन् । उनीहरुको प्रतिस्पर्धा पनि रोचक हुने अनुमान गरिएको छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङका मतदाताले भट्टराई र दाहालमध्ये कसलाई जिताउलान् हेर्न बाँकी छ ।
ओखलढुंगामा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा र एमालेका यज्ञराज सुनुवार पनि आमने सामने भएका छन् । खतिवडा र सुनुवार दुबै नेता उत्तिकै चर्चित छन् । युवामाझ लोकप्रिय यी दुई नेतामध्ये कसको पक्षमा चुनावी परिणाम जाला भन्ने चासो छ ।माओवादी नेताहरु देव गुरुङ, वर्षमान पुन ‘अनन्त’, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र महेन्द्रबहादुर शाहीको भाग्य फैसला पनि पहिलो चरणको निर्वाचनबाट हुँदैछ । यी पाँचै जना माओवादी नेताहरुका प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग छ ।
गुरुङसँग दिलबहादुर घर्ती, अनन्तसँग अमरसिंह पुन, शर्मासँग गोपालजी जंग शाह, बस्नेतसँग राजीवविक्रम शाह र महेन्द्रबहादुर शाहीसँग भुपेन्द्रजंग शाही प्रतिस्पर्धामा छन् ।माओवादीका पाँचैजना माओवादी नेताहरु मन्त्री भइसकेका र पार्टीमा बलियो प्रभाव जमाउँदै आएका नेताहरु हुन् । तर, मतदाताहरुमाझ प्रभाव जमाएका छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउन चुनावी परिणामलाई कुर्नैपर्ने हुन्छ ।